रावणभित्रको असली चरित्र | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ कार्तिक १४, शुक्रबार ०९:०५ गते
रामायणमा कथाको राक्षस प्रवृत्तिको रुपमा चिनाइएको रावणले भगवान् श्रीरामकी पत्नी अपहरण गरेपछि राम लंका पुग्छन् । युद्धमा रावणलाई रामले मार्दछन् । रावणको दस वटा शिर हुन्छ । रावणलाई मार्न रामलाई ती दस वटै शिर काट्नु पर्दछ ।
सबै शिर काटेर रावणको बध गरेपछि युद्ध जितेर राम अयोध्या फर्कनुअघि भाइ लक्ष्मणसँग भने, म हिमालयमा रहेको अगस्त मुनीको गुफामा केही समय बिताउन चाहन्छु, किनभने म आफ्नो हातले गरेको पापको प्रायश्चित गर्न चाहन्छु ।
दाजुको कुराले आश्चर्यजनक हुँदै लक्ष्मणले प्रश्न गरे, रावणलाई मार्नु पाप कसरी हुन्छ ? उसले तपाईंको धर्मपत्नीको अपहरण गर्‍यो । रामले भने, त्यो उसको अरु नौ वटा शिर थियो । ती नौ शिरमा जलन, ईष्या, लालच, रिस थियो । तर, ऊसँग एउटा यस्तो शिर थियो, जो धर्म परायण थियो । शिवको भक्त थियो । महान् राजा थियो । दयालु थियो । उसमा विवेक, ज्ञान, धार्मिकता सबै थियो । मलाई त्यो शिर काटेकोमा पछुतो छ । त्यो शिर नकाटे उसलाई हराउन सकिन्न थियो बाध्यतावश काट्नु पर्‍यो । त्यसैले म प्रायश्चित गर्न चाहन्छु ।
हामी सामान्य मानिससँग पनि त्योभन्दा धेरै शिर छ । कहिले अहंकार, कहिलेकाहीँ जलन, कहिले ईष्या त कहिलेकाहीँ माया । समय समयमा यी सबै स्वभाव देखाउँछौँ । सबैमा रिस, अहंकार होस् वा नहोस् तर करुणा, सुन्दरता, भक्ति, दया सबै गुण भएको शिर अवश्य पनि हुन्छ ।
तर, हामीले गर्ने भूल भनेको कुनै पनि गुण वा दोषलाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई आलोचना गर्न हतार गर्छौं । व्यक्तिको कुनै पक्षमा दोष छ वा खराब छ भन्दैमा पूर्णरुपमा व्यक्तित्वमाथि नै इन्कित गर्नु सरासर गलत हो । रावणले गरेको सीताको हरणमा उसले गलत गरेको हो ।
सीताको हरण गर्नु उसको गलत पाटो हो भन्दै गर्दा उसको असल पक्ष बिर्सनु हुँदैन भनेर लक्ष्मणलाई रामले सम्झाएका थिए । त्यसैले भगवान् श्रीरामको महानतालाई आज पनि उत्तिकै श्रद्धाका साथ पुजिन्छ ।
सम्भावना बलियो राख्नु छ भने सम्भावनामा बाधा पुर्‍याउनेसँग टाढा रहन सक्नुपर्छ । हामी आफ्नो तबरले अरुको बारेमा धारणा बनाउँदछौँ । यतिसम्म कि देख्दै नदेखेको वा नचिनेका मान्छेको बारेमा पनि धारणा बनाउँछौँ आफनो तरिकाले । जसलाई जति नजिकबाट चिन्दछौँ ऊसँगको माया र सम्मान त्योभन्दा मजबुत हुनुपर्छ । रामले रावणभित्र पनि महान् भक्ति, श्रद्धा देखे । लंकाको असल राजा देखे । त्यसैले अन्तिमसम्म पनि उसको त्यो दया र भक्तिले भरिएको शिर काट्नु परेकोमा पछुतो मानिरहे ।
एउटा गुलाफको बोटमा हजारौँ काँडा हुन्छन् र पनि त्यो फुलेको फूललाई हेरेर गुलाफको बोट भनिन्छ । काँडाको बोट भनिँदैन । किनकि हामी सुन्दरतालाई चिन्दछौँ । पातै पातले भरिएको आँपको रुखमा आँप नफलेको भए पनि हामी आँपको रुख भन्दछौ पातको रुख भन्दैनौँ । किनभने, हामीलाई आँपको मिठास थाहा छ ।
हामी अरु चिज वा वस्तुमा सुन्दरता र मिठास देख्दछौँ भने मान्छेमा देख्न किन कन्जुस्याइँ गर्छौं ? हामीले अरुमा देखे अरुले पनि हामीमा देख्दछन् । हाम्रो आसपासका मानिससँगको केही क्षण त पक्कै होला, जसले हामीलाई खुसी दिएको थियो । त्यही पललाई सम्झिएर ऊ असल छ भन्न हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ । हामी काँडा र फूलबीचको अन्तर छुट्टाउन सक्छौँ त्यसैले फूल रोज्दछौँ । पात र आँपबीचको फरक सजिलोसँग छुट्टाउन सक्छौँ । हरेक मान्छेभित्रको दोषमात्रै होइन, गुण, सरलता, करुणा, दया यी विशेषताहरुको पनि पहिचान गर्न सिकौँ । सम्मानका साथ बाचौँ ।